Inona ny Cargocollective ary maninona no ataoko any ny portfolio-ko? | Famoronana an-tserasera
Lua louro | | Famolavolana tranonkala, General
Cargocollective Izany dia sehatra anaty aterineto mikendry ny hamorona tranokala ho an'ny matihanina mifandraika amin'ny tontolon'ny fahitana: mpanakanto, mpamorona, mpamorona, mpaka sary sns.
Raha teôria dia sehatra manokana azontsika idirana (amin'ny maha mpampiasa azy) izy io lalana miditra roa: ny voalohany, amin'ny fanasan'ny namany izay efa azy; ary ny iray hafa, mangataka amin'ireo mpitantana ny Cargocollective mba hanaiky anao.
Lahatsoratra vitsivitsy lasa izay dia nanolotra ireo fanasana 4 izay azoko avy amin'ny Cargocollective (eny, manana ny portfolio-ko koa noforonina tamin'ity "fitaovana" ity). Izany no ilazako azy satria, raha tsara vintana ianao ary mitsidika an'io lahatsoratra io, mety ho azonao ny iray amin'izy ireo. Androany dia misy 3 sisa (angamba rehefa vitako ny manoratra ny lahatsoratra dia tsy hisy sisa intsony).
Andao hidina amin'ny orinasa. Inona no atolotry ny Cargocollective ahy?
Volavola tena madio sy tsara, azo atao ny manova CSS sy HTML na mametraka modely hafa.
Fanamorana ny fanavaozana ny portfolio-ko.
Azo atao ny mampiantrano azy amin'ny sehatra tadiavinao (miaraka amin'ny kinova PRO).
Eto ny portfolio-ko amin'ny Cargo (fampiroboroboana tena madio, sarotra, aza raisina izany)
Ary aorian'ny famakiana ity dia mety hieritreritra ianao fa tsy manana zava-baovao. Ny fanapahan-kevitra amin'ny sehatra iray na hafa dia tsy asa mora, ary ambonin'izany rehetra izany dia safidy voafaritra tsara. Azoko atao ve ny manao ny portfolio-ko amin'ny Tumblr? Eny, afaka izany. Tena nanandrana aho fa tsy resy lahatra. Azonao atao ve izany Domestika, sa an'i Behance? Eny, afaka izany. Fa tiako ilay fisehoan'ny tranonkala tsirairay, tsy ny fahatsapana hoe anisan'ny vondrom-piarahamonina (ary ho an'ny firaketana an-tsoratra dia nanandrana azy ireo koa aho). Azonao atao amin'ny WordPress ve izany? Eny, afaka izany. Fa hitako ity sehatra ity dia mikendry tetikasa lehibe kokoa. Efa zatra miasa miaraka amin'ny WordPress aho ary izay tiako momba ny Cargocollective etsy ambony dia ny fomba haingana ahafahako manavao faritra iray. Ary tsy mila mametraka plugins fiarovana ...
Raha tsy ny hamorona tranokala noely no tanjonao, izay azo apetraka an-tserasera ary hatolotra ho an'ny Awwwards, mari-pankasitrahana CSS ary fanekena virtoaly hafa dia safidy tsara ny Cargo. Satria ny lakilen'ny portfolio tsara Izy ireo dia:
Hamafana ny votoatiny, atiny milahatra tsara
Ary mazava ho azy: mifantina atiny tena izy na amin'ny sary na amin'ny lahatsoratra (azafady, aza mihodina manodidina ilay roimemy).
Iza ireo Ny lafy ratsy an'ny Cargocollective?
Fepetra ao amin'ny kinova maimaim-poana: azonao atao ny mampakatra tetikasa maherin'ny 12 sy pejy 3 (miaraka amin'ny 100MB ambony indrindra). Volavola 10 misy.
Mba hisorohana ireo lafy ratsy ireo dia ny lasa mpampiasa PRO (lozika, marina?).
Izao efa tonga lavitra izao ianao dia mety manontany tena ahoana ny SEO amin'ny karatra. Azontsika atao ny mamaritra ny tag izay ifandraisanay amin'ny portfolio sy ny famaritana izay hiseho amin'ny valin'ny Google. Te-hamaritra ny masontsivana SEO ho an'ny tetikasa tsirairay ve ianao? Eny ... Tsia. Mety ho iray amin'ny maharatsy ny Cargo io. Saingy tena… Ahoana araka ny hevitrao no hahitan'ny mpanjifanao anao? Mikaroka amin'ny anaranao sy ny asanao, na amin'ny anaran'ny tetikasa iray?
Ny torohevitra tsara ho ahy dia ny andramanao tsirairay izy rehetra. Ary tazomy ilay mandresy lahatra anao indrindra. Amin'ny farany dia tsy hoe misy sehatra tsara kokoa na ratsy kokoa, fa ilay mety tsara indrindra araka izay ilainao. Sehatra inona no tianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Inona ny Cargocollective ary maninona aho no mamorona portfolio-tserasera ao?
Misaotra betsaka fa tsara ny lahatsoratrao
Misaotra anao namaky, Juan :)
Maribelle ocegueda dia hoy izy:
Salama Lua louro :) Misaotra tamin'ny tolo-kevitra, tena aleoko ny Cargocollective, tiako ny an'ny: «… Saingy tiako ny lafiny iray amin'ny tranokala tsirairay, fa tsy ny fahatsapako ho anisan'ny vondrom-piarahamonina»
Misy ve ny volavola anananao amin'ny iray amin'ireo maimaim-poana? ...
Miandry ny valinteninao amin'ny namana aho. Misaotra betsaka
Valiny tamin'i Maribelle Ocegueda
Farito ny fombanao dia hoy izy:
Salama! Efa ela aho no nanana ny portfolio-ko amin'ny Cargo fa manandrana manova horonantsary aho ary tsy misy fomba. Tsy mampaninona anao ve ny manazava ny fomba fanaovana azy? Manaraka ny dingana amin'ny fanohanan'ny kargo aho fa tsy misy fomba. MISAOTRA
Valiny hamaritana ny fombanao
Salama! Azafady ny tsy fahalalako azy, fa nanao ny portfolio-ko tamin'ny Cargo aho ary izao tsy haiko ny mampakatra azy amin'ny tamba-jotra :( Misy olona afaka manampy ahy ve? Misaotra betsaka!
Salama afaka misy manasa ahy ho tompon'andraikitra?
Mila mahalala css ve ianao ??
listersilva dia hoy izy:
salama, misy manana fanasana ho an'ny toerana misy ve?
Ary fanontaniana iray hafa: inona ny sandan'ny fananana kaonty pro hahafahana mampiantrano azy amin'ny sehatra iray?
Mamaly an'i listersilva
josemmateotorres dia hoy izy:
Salama, mety misy manasa ahy any amin'ny Cargo?
Mamaly an'i josemmateotorres
hevitraforfuel dia hoy izy:
Salama, miombon-kevitra amin'ny zavatra rehetra lazainao aho (Kargo ihany koa no ampiasaiko), saingy tsy hitako hoe tsy hitady anao amin'ny anaran'ny tetikasa mihitsy ny mpanjifa. Heveriko fa imbetsaka izay tonga mora raisina, ohatra, rehefa misy mahita fampielezan-kevitra amin'ny fahitalavitra, ny famolavolana afisy na inona na inona ary te hahafantatra hoe iza no nanao azy hanafatra zavatra avy amin'izy ireo.
Inona no manome antsika fahitana misimisy kokoa ny asantsika, ka tsara kokoa raha hitan'izy ireo mora foana isika amin'ny alàlan'io, sa tsy izany? Alao sary an-tsaina hoe nataonao ny tranokalan'ny Bankia, ny ankamaroan'ny olona mahita azy dia tsy hanana hevitra hoe iza no nanamboatra azy, handeha any amin'ny Google izy ireo ary inona no holazain'izy ireo, "mpanoratra tranonkala Bankia" na "mpamorona sary Lúa Louro"?
Toy ny an'ny fiarahamonina iray, tsara kokoa ny manana fahitana amin'ny fiarahamonina iray izay mitsambikina avy amin'ny pejy iray mankany amin'ny iray hafa ny olona noho ny irery ary tsy misy mahita antsika na dia sendrasendra aza ...
Ao amin'ny Cargocollective aho, eh, ho an'ny firaketana an-tsoratra dia tsy ny hiarovana ireo sehatra hafa (izay tsy haiko akory).
Miarahaba anao ary misaotra amin'ny lahatsoratra!
Valio ny hevitra momba ny solika
Fernanda V dia hoy izy:
Salama, herinandro vitsivitsy lasa izay dia nanokatra ny portfolio-ko aho, ary mikasa ny hividy ny kinova PRO, ny fanontaniako dia hoe: ho ahy irery no ividianako ilay domaine, sa hividy ny fonosana feno amin'ny HOST ihany koa aho ary koa handidy izany?
Valiny tamin'i Fernanda V
Arizona marley dia hoy izy:
Salama, misy fomba hahazoana fanasana avy amin'ny Cargo? Misaotra betsaka
Mamaly an'i Arizona Marley
Cargo dia vovoka. Mety tsy naninona teo aloha. Izao no ratsy indrindra. Miadana sy lany andro ny tranonkalany, ary mandoa ianao ary tsy misy serivisy ho an'ny mpanjifa. Tsy afaka mandefa mailaka amin'izy ireo akory ianao, fa "tapakila" fotsiny izay tsy asiany fiheverana. Misy safidy an'arivony tsara kokoa sy tsy dia mampidi-doza.